यस्ता छन् संसारका पाँच आलिशान विमान
/ २०७६, २२ फाल्गुन बिहीबार ०७:४३ प्रकाशीत
फाल्गुण २२ एजेन्सी : सन् १९०३ डिसेम्वर १८ को दिनमा मानवजातिको आकाशमा उड्ने सपना पुरा भएको थियो। उक्तदिन ‘राइट’ दाजुभाइले पहिलो पटक ‘द फ्लायर’ नामक विमान उडाएका थिए।त्यस पछि ग्लाइडर ‘किटी हक’मा प्रोपेलर प्रयोग गरेर विमान तयार गरिएको थियो। उक्त विमानले १२ सेकेण्डको उडान भरेर ईतिहास रचेको छ। यही एतिहासीक समझनामा आज हामी तपाँइहरुलाई संसारभरिका सबैभन्दा शौखिन तथा आरामदयी पाँच हवाईयात्राको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौ।
१. सिंगापुर एयरलाइन्स : सिंगापुर एयरलाइन्सको विमान ए३८० मा यात्रुलाई शाही तवरले स्वागत गरिन्छ। अमेरिकाको फ्रेकफर्टबाट न्युयोर्क जाने उक्त विमान भित्र ‘कपल्स’को लागि स्पा, बार तथा गोपनियाताको विशेष सुविधाको व्यबस्था गरिएको छ।
२.एतिहाद डायमण्ड फर्स्ट क्लास : संसारको दोस्रो सबैभन्दा शानदार यात्रा एतिहाद एयरलाइंसले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। एतिहाद डायमण्ड फर्स्ट क्लासले यात्रुको बिशेष ख्याल राख्दछ। विमानले यात्रुहरुको रुचाएको खाना दिनुका साथै प्रत्येक यात्रुलाई आफ्नो नामले बोलाउने व्यवस्था गरेको छ।
३. एमिरेट्स फर्स्ट क्लास सुईट्स : यूनाइटेड अरब एमिरेट्सको धेरै विमानहरुमा फर्स्ट क्लास सुईट्सको सुविधा उपलब्ध रहेको छ। यो फ्लाइटमा यात्रुको हरेक सुबिधाको ख्याल राखिन्छ। धेरैजसो विमानमा यसको सिट बेडमा परिवर्तन गर्न सकिने रहेको छ ।
४. एएनए फस्ट स्क्वायर : जापानको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो एयरलाइन्स एएनए (अल निप्पोन एयरवेज) हो। यस विमानमा यात्रुहरुको बिशेष ख्याल राखिन्छ। यो बिमानमा रमाइलो गर्नको लागि प्रशस्त ठाँउहरु रहेका छन्।
५. कतार एयरवेज बिजनेस क्लास :कतार एयरवेज बिजनेस क्लासमा मनोरञ्जनको लागि खास व्यब्स्था गरिएको छ। यो विमानमा सिटको सजावटमा बिशेष ध्यान दिइएको छ। सानो बाथरूम भएपनि सुहाउदो रहेको छ।